आठ घन्टा बहसपछि विद्या सर्वसम्मत, झलनाथको आक्रोश : पार्टी भनेको तपार्इंको घर हो ? - samayapost.com
आठ घन्टा बहसपछि विद्या सर्वसम्मत, झलनाथको आक्रोश : पार्टी भनेको तपार्इंको घर हो ?
समयपोष्ट २०७४ फागुन २४ गते १:१६
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा तीनपटक जुटे नेता, चर्को बहसपछि मध्यरातमा निर्णय
ओलीको प्रस्ताव– विद्याका नाममा प्रचण्डसँग समझदारी छ, सर्वसम्मत निर्णय गरेर सकारात्मक सन्देश दिन आवश्यक छ ।
आजको नयाँ पत्रिकामा शुरोजंग पाण्डेले यो खबर लेखेका छन् झलनाथको आक्रोश– पार्टीमा सल्लाह नै नगरी केका आधारमा समझदारी भयो ? पार्टी हामीले पनि हाँकेका हौँ, के यो तपाईंको घर हो ?
भुसालको चुनौती– संसदीय दलमा एजेन्डासहित तपाईंसँगै लड्ने तयारीमा थिएँ, तर अवसर किन दिइएन ? यो शैली पार्टीमा स्वीकार्य छैन ।
माधव नेपालको मध्यमार्ग पार्टीमा सल्लाह नगरी एकतर्फी निर्णय हुने गरेकोमा नेपालले आक्रोश पोखे । तर, राष्ट्रपति उम्मेदवारबारे मौन बसे ।
नेम्वाङको दुःखेसो– विदेशीले मलाई फादर अफ कन्स्टिच्युसन भन्छन् । मेरो विषयमा छलफल होेस्, बरु म एकछिन बाहिर बस्छु ।
– यसरी भयो निर्णय
शीर्ष नेताबीच ओलीको प्रस्ताव : विद्यालाई सर्वसम्मत
राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अघिल्लो दिन मात्र एमालेले स्थायी समिति बैठक बोलाएको थियो । औपचारिक र अनौपचारिक गरी पटक–पटक बसेको बैठकले राति १२ बजे मात्र भण्डारीको पक्षमा निर्णय गरेको थियो । अध्यक्ष केपी ओलीले समझदारीका लागि शीर्ष नेताहरूलाई बिहानै बालुवाटार बोलाएका थिए । छलफलमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र ईश्वर पोखरेललगायत सहभागी थिए । अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति पदको गरिमा राख्न पनि पार्टीबाट सर्वसम्मत उम्मेदवार छान्नुपर्ने भन्दै विद्या भण्डारीको पक्षमा निर्णय गराउने आशय प्रकट गरेका थिए । ‘अहिले पार्टी एकीकरण हँुदै छ, त्यसका लागि सकारात्मक सन्देश पनि दिनुपर्नेछ । अहिलेकै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई दोहो¥याउने विषयमा प्रचण्डजीस“ग पनि समझदारी बनेको छ । त्यसैले हामीले पनि सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ ।’
ओलीको कुरा सुनेर आक्रोशित बनेका खनालले पार्टीमा छलफल नै नगरी त्यत्रो समझदारी कसरी भयो र अहिलेसम्म किन जानकारी भएन भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उनले इतिहासदेखि नै पार्टी पद्धतिका आधारमा चल्दै आए पनि अहिले कसैको घरजस्तो गरी चलाउन थालिएको आरोप लगाएका थिए । ‘पार्टी महासचिव र अध्यक्षका रूपमा मैले पनि पार्टी हाँकेको छु, अरू नेताले पनि पद्धतिका आधारमा पार्टी चलाएका थिए, तर तपार्इंले सबै पद्धति मिच्नुभएको छ, कुनै नेताको राय पनि लिनुनपर्ने यो पार्टी के तपाईंको घर हो ?’ उनको प्रश्न थियो । खनालले आपूm राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न चाहेको र यो विषयमा पार्टीको आधिकारिक निकायमा छलफल हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखेका थिए । खनालको आक्रोश ओलीले खासै प्रतिक्रिया दिएनन्, बरु संसद् बैठकका लागि सबै नेता बानेश्वरतर्फ लागे ।
संसद् बैठकपछि एमाले स्थायी समिति बैठकका लागि बालुवाटारमा जम्मा भएका नेताले सुरुमै वरिष्ठ नेता माधव नेपालको जन्म दिन मनाए । नेताहरू बसेको ठाउँमा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीकी पत्नी राधिका शाक्यले केक बोेकेर आएकी थिइन् । त्यस्तै, झलनाथ खनालले नेपाललाई बुके दिँदै दीर्घायुको शुभकामना दिएका थिए अरू नेताहरूले पनि केक खाँदै नेपाललाई शुभकामना दिए । तर, अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने भन्दै नेता नेपाल निस्किएपछि अरू पनि तितरबितर भएका थिए । यसरी ४ बजे बोलाइएको बैठक एजेन्डामा प्रवेश नगरी स्थगित भएको थियो ।
वर्तमान राष्ट्रपतिलाई दोहो¥यानुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्बीसुब्बा गुरुङ, सुवास नेम्बाङ, शंकर पोखरेल किरण गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा, मुकुन्द न्यौपानेले धारणा राखे । त्यस्तै, खनालको पक्षमा युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, सुरेन्द्र पाण्डे बोलेका थिए । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र भीमबहादुर रावलले पार्टी सञ्चालन पद्धति र शैलीका विषयमा ओलीको आलोचना गरे पनि राष्ट्रपति उम्मेदवारको विषयमा कुनै तर्क राखेनन् ।
ओलीलाई भुसालको प्रश्न– तपाईंसँग चुनाव लड्न चाहन्थेँ, अवसर किन दिइएन ?
तर, आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्न प्रक्रिया नै मिचेर किन हाटहुट–साटसुट गर्नुभो । यसपटक संसदीय दलको नेतामा एजेन्डासहित तपाईंसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्थेँ तर किन अवसरै दिइएन ? अहिले फेरि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार छान्न अन्तिममा मात्र बैठक बोलाइएको छ । प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्रीमा बरिष्ठ महिला नेतृका रूपमा सर्वसम्मत गरौँं भनेर अष्टलक्ष्मी शाक्यले पटक/पटक अनुरोध गर्दा बैठक बोलाइएन । उहा“जस्तो नेताको रोदन क्रन्दनको पनि सुनुवाइ भएन । तर, आज विद्या भण्डारीको पक्षमा भने सर्वसम्मत गरिदिनुपर्ने ? यो शैली हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’
अघिल्लो कार्यकालमा पार्टीबाट सहजरूपमै राष्ट्रपति उम्मेदवार बनेकी भण्डारीको नाममा यसपटक भने लामै बहस भएको छ । भण्डारीले दुईवर्षे संक्रमणकालमा मात्र राष्ट्रपति रहेको, विवादित भूमिकामा नदेखिएको र लामो आन्दोलनबाट खारिएको शिखर महिला व्यक्तित्व भएकाले उनलाई नै दोहो¥याउनुपर्ने ओली समूहका नेताहरूको भनाइ थियो ।
नरम ओलीले भने, अब मलाई केही लोभ छैन, सबैलाई मिलाउँछु
राष्ट्रपतिका आकांक्षी खनाल र उनीप्रति सहानभूति राख्ने नेताहरूले पार्टीभित्र कसरी अराजकता मौलाइरहेको छ भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गरेपछि अध्यक्ष ओलीले कमजोरी स्वीकार गरेका थिए । ‘म सबैलाई मिलाएरै पार्टी चलाउँछु, वरिष्ठ नेताहरूसँगको परामर्शमै अघि बढ्छु, अध्यक्ष भइसकेको छु, प्रधानमन्त्री पनि भइसकेको छु, अब मलाई अरू केही पनि पद आवश्यकता पनि छैन, कुनै लोभ पनि छैन’, ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने,‘तपाईं (खनाललाई लक्षित गर्दै)को योगदानको पनि उचित मूल्यांकन र कदर हुनैपर्छ ।
– राष्ट्रपतिमा भण्डारी र राईको उम्मेदवारी
– अधिकांश दलको समर्थन छ, अझै प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ : भण्डारी
मैले जे गरेकी छु, त्यो देशका लागि खुला किताबजस्तो छ । यथार्थ कुरा बाहिरी आँखाले मात्र होइन, भित्री आँखाले पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ । मैले अहिलेसम्म जे भूमिका निर्वाह गरेकी छु, त्यो संविधान, कानुनसम्मत छ भन्ने मेरो विश्वास छ । उम्मेदवारीमा अधिकांश दलको समर्थन छ, अझै प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेकी छु ।
– नेपालीले अन्तर्घात जानेकै छ, मैले जित्न सक्छु : राई
सहिद दिवानसिंह राईकी छोरी हुँ, राजनीतिमा जीवन समर्पण गरेकी छु, जित्छु भन्ने लाग्छ, नेपालीले अन्तर्घात गर्न जानेकै छन् । उहाँलाई अन्तर्घात गरेर मलाई जिताए भने के हुन्छ ? हार्छु भनेर उम्मेदवारी दिएकी होइन, जित्छु । सभापतिका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङले मलाई उम्मेदवार बनाउने विषयमा छलफल भएको भन्दै विचार के छ भनेर सोध्नुभयो । लड्न तयार छु भनेपछि सभापतिले कुरा गर्नुभयो । पार्टीले मलाई उम्मेदवार बनाएर सहिद परिवारको सम्मान गरेको छ ।
मत : ३६,८६४
मत : ११,४२८
अन्य मत : ४,२४८
– एमाले : २३,३५६
– माओवादी : १०,३१९
– संघीय फोरम : ३,१८९
– जम्मा मत : ५२,७८६
– आवश्यक : २६,९२१